Thursday October 01, 2020 - 12:35:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wadanka Masar waxaa wali kasii socda dibad baxyada rabshadaha wata ee lagu diidanyahay taliska faasidka ah ee cabdi fataax alsiisi madaxda ka yahay.
wararka ka imaanaya gobollada wadankaas ayaa sheegaya in ciidamada ashahaadda ladirirka dowladda masar ay sare uqaadeen dilalka ay ugeysanayaan dadka shacabka ah ee mucaaradsan.
warbixin kasoo baxday hay'adda amnesty ayaa lagu sheegay in nidaamka alsiisi uu kumanaan kun oo ruux si macna darra ah xabsiyada ugu taxaabay iyadoo aan wali wax maxkamad ah lasoo taagin.
Dhacdooyin shalay lasoo calaamadeeyay ayaa muujinaya in toogashooyin hor leh ay geysteen ciidamada sirdoonka alsiisi.
Deegaanka Cawamiya oo ka tirsan mandiqadda Aqsar ee koonfurta dalka Masar waxaa ka dhacay iska hor imaadyo rabshado wata oo u dhaxeeyay ciidamada ammaanka iyo banaanbaxayaal ka careysan dilka ay ciidamadu u geysteen dhalinyaro deegaanka ah.
Sida laga soo xigtay ilo maxalli ah iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa dadka ladhiban jowrka nidaamka alsiisi ciidamada booliska gaarka ah ayaa dilay Aways Al-Raawi intii lagu jiray hawlgalkii dhacay barqanimadii hore ee maalintii Arbacada waqtigaas oo wiiilka ladilay uu muujiyay diidmadiisa in booliisku ay xiraan walaalkiis balse isaga ayay si bareer ah udileen.
Wararka ayaa intaa ku daraya in sarkaal boolis uu madaxa ka toogtay wiilkii uu dilay intaas ka dib tuulada ayaa isku badashay xero militari halkaasoo ay soo gaareen ciidamo fara badan iyo gawaarida gaashaaman waxayna isku dayayeen in ay ka hortagaan carada dadka.
Wariyaal ayaa soo sheegay in xukuumadda alqaahira ay si aan horay loo arag heegan ugelisay ciidamada booliska iyo kuwa rabshadaha ka hortaga waxaana wadanka ka jira wax u eg dagaal maxalli ah oo ka dhan ah shacabka.
Dhacdooyinkaani waxay imanayaan kadib todobaad dhan oo mudaharaadyo ka socdeen dhowr gobol oo ka tirsan Masar kuwaasoo looga soo horjeedo hoos u dhaca heerka nolosha iyo qaanuun ay dowladdu soo saartay oo faraya muwaadiniinta in ay bixiyaan ganaaxyo culus si looga fogaado duminta guryahooda iyadoo loo sababeynayo in ay jabiyeen shuruudaha dhismaha banaanbaxayaashuna waxay dalbadeen in uu xukunka ka dego Madaxweynaha kaligii taliska ah ee cabdi fataax alsiisi kaasi oo talada masar kula wareeg inqilaab dhiig badan ku daatay.
Mudaharaadyadan ayaa waxaa aad ukiciyay nin mucaarad ah oo lagu magacaabo Maxamed Cali oo isagu lahaa shirkad qandaraas oo la shaqaysa ciidanka ka hor intii uusan ka goosan nidaamka wuxuuna bilaabay inuu soo bandhigo dhacdooyin musuqmaasuq iyo lunsi lacag dawladeed oo ay ku kaceen saraakiisha ciidamada melleteriga Masar.